थप ३१६ सङ्क्रमित, जम्मा १३ हजार ५६४ पुग्याे – Easykhabar : Get News Easily
थप ३१६ सङ्क्रमित, जम्मा १३ हजार ५६४ पुग्याे
उपत्यकामा १४ सङ्क्रमित
in बिशेष समाचार, समाचार
कोरोना भाइरस (कोभिड–९०) सङ्क्रमितको सङ्ख्या मंगलबार १३ हजार ५६४ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर थप ३१६ जनामा कोरोना सङ्क्रमित थपिएको जानकारी दिनुभयो । याेसँगै एकहजार ६५७ महिला र ११ हजार ९०७ पुगेकाे छ ।
देशभर मंगलबार थप ६० डिस्चार्ज भएका छन् । याेसँगै निकाे हुने तीन हजार १९८ पुगेकाे छ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ९ महिला र पुरूष ५१ जना डिस्चार्ज भएका छन्। अहिलेसम्म २७७ महिला र २९१७ पुरूष निकाे भएका छन् ।
यस्तै, क्वारेन्टाइनमा ५३ हजार ७० र आइसोलेसनमा दशहजार ३४१ जना रहेका छन् ।
काठमाडौँ जिल्लामा ७ पुरुष र महिला ५ सहित १२ जना, ललितपुरमा एक पुरूष र भक्तपुरमा एक महिलालाई कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ । यसरी उपत्यकामा मगंलबार अहिलेसम्मकै बढी सङ्क्रमित थपिएका छन् ।
काेराेना उपचारमा नेपाल
नेपालमा कोरोना भाइरस रोकथामको लागि भएका प्रयास विश्वको लागि उदाहरणीय भएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा प्रा.डा. गौतमले नेपालमा कोरोना भाइरसबाट हुने मृत्युदर अत्यन्त कम भएको बताउनुभयो । अमेरिका, बेलायत, जापान, चीनलगायतको देशको तुलनामा अत्यन्त कम रहेको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, उहाँका अनुसार दक्षिण एसियाली मुलकहरुमा प्रति दशलाखमा भएकाे मृत्युदर बंगलादेश, भारत, माल्दिभ्स, अफगानिस्तान र पाकिस्तानको तुलनामा कम रहेको छ ।
पीसीआर परीक्षणमा नेपालमा दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान, भारतलगायतका देशहरु भन्दा धेरै अगाडि रहेकाे उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा चारहजार ७११ वटा पीसीआर परीक्षण भएको छ ।
३८१ नयाँ संक्रमित थपिए, एकैदिन ५ जनाको मृत्यु
जुनेल जीपीको अध्यक्षतामा नेकपा माओवादी गठन, क्रान्ति पुरा गर्ने उद्घोष
आज ४१८ मा सङ्क्रमण, कुल २१ हजार १६८ पुग्यो
मेलम्ची बजारमा पहिरोमा पुरी ८ जना बेपत्ता र १ जनाको उद्धार
जनकपुरमा एक साताका लागि कर्फ्यु जारी
आज २४६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, काठमाडौँमा ३१ जना थपिए
बाबुरामलाई भारतीय प्रवक्ता भन्ने माउन्टेन टिभीलाई कारवाही माग गर्दै प्रेस काउन्सिलमा उजुरी
Share 1681 Tweet 174
थारु राष्ट्रिय संग्रहालय निमार्णमा अबरोध पुर्याउने डिएफओ मन्त्रालय तानिए
गैडाकोटमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको डाइभर्सन भत्कियो, राजमार्ग अवरुद्ध
Share 106 Tweet 20